Ny fiakaran'ny maridrefy marobe | Martech Zone
Ny fiakaran'ny maridrefy marobe
Zoma 9 Novambra 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany tolakandro dia nisy fitsidihana nahafinaritra nataoko niaraka tamin'ny New Media Club tao amin'ny IU Kokomo. Ny klioba dia misy mpianatra, na vaovao na nahazo diplaoma, ary koa ireo mpampianatra izay mitarika ny fiampangana. Ny dinika dia ny raharaham-baovao.
Tsaroako tamin'ny vao nanomboka DK New Media, mpiara-miasa fanta-daza nilaza tamiko mba tsy hanadino ny fiasa amin'ny lafiny rehetra amin'ny ezaky ny varotra orinasa iray ary hifantoka amin'ny faritra iray. Nanamafy aho fa izany no olana amin'ireo masoivoho… manana fifantohana kely sy fahaizana manokana izy ireo amin'ny lafiny iray ifantohana - ny marika, ny endrika, ny fifandraisana amin'ny daholobe, ny marketing amin'ny mailaka - saingy tsy dia nahafantatra tsara ny fiantraikan'ny ezak'izy ireo tamin'ny ezaka ambony sy ambany.
Ohatra vitsivitsy amin'ny sehatra ifantohana samihafa:
Famolavolana Sary - Ireo mpamorona mahay dia mahatakatra ny fomba hametahana ny fisie mba ho tsotsotra ho an'ny mpamorona tranokala manapaka sy mamoaka sary ary mamoaka sary ho an'ireo tranonkala ampihariny.
Videography - mahatakatra ny fomba hanatsarana ny pejy navoakan'izy ireo ary hahatakatra ny fomba fanaovana dokam-barotra ireo mpanao horonantsary lehibe mba hanitarana sy hampiroborobo ny fahafahan'ny horonantsarin'izy ireo.
mailaka Marketing - Ireo mpivarotra mailaka tsara dia manaiky ny fotoana ahafahana mitondra famandrihana amin'ny alàlan'ny media sosialy hahafahan'izy ireo manangana lisitra tsara kokoa ary mitondra varotra bebe kokoa.
Search Engine Optimization - ny consultants SEO lehibe dia mahatakatra ny fomba fanatsarana ny fiovam-po sy marketing amin'ny fomba fanao tsara indrindra hahazoana antoka fa ny laharana dia mitarika any amin'ny fifamoivoizana.
Marketing toy ny famokarana
Araka ny efa fantatrao, ny famokarana dia nifindra tany amoron-tsiraka ho any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana. Ny fananganana ampahany kely, ny famerenana ny ampahany, ary ny fananganana ireo fotodrafitrasa hamoahana faritra an-tapitrisany dia tsotra amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana. Raha nifindra tany amoron-dranomasina ny famokarana ampahany, i Amerika Avaratra dia mbola manangana orinasa mpamokatra fivoriambe ary mbola mitondra zava-baovao amin'ny famokarana. Vokatr'izany dia mbola manana asa ny mpamorona, mpamorona ary injeniera… saingy tsy manana ny mpamokatra.
Marketing ny manaraka. Miara-miasa amin'ny orinasa amoron-tsiraka maromaro izahay izay manao fikarohana, atiny, famolavolana ary fampandrosoana. Ny kalitaon'ny asa dia somary tsara araka izay azontsika hamokarana eo an-toerana, izy ireo ihany no mahomby kokoa. Tsy afaka mifaninana isika. Vokatr'izany, ny valiny dia ny fampiasana fitaovam-piaraha-miasa sy ny fanitarana ny loharanon-karena any ivelany.
Ny ekipanay mivarotra dia mitarika, mamorona ary mampihatra ny paikady ankapobeny. Amim-pahatsorana no ampiasana antsika tsara indrindra. Ny loharanon-karena any ivelany dia manao asa mahatalanjona, sady manitatra ny loharanon-tsika no manampy antsika handanjalanja ny orinasanay nefa tsy handany vola be. Tsy hoe tsy misy bontolo io fa nahomby ary mitombo hatrany izahay ary mahazo valiny tsara avy amin'ny mpanjifa.
Fampitandremana ho an'ny mpivarotra any io. Raha manapa-kevitra ianao fa te-hanana manam-pahaizana manokana fa tsy mahatakatra ny fomba ifandraisan'ny fahalalanao ho fonosana iray manontolo, dia azo soloina toy ny cog hafa amin'ny tsipika famokarana ianao. Raha tsy mitovy hevitra ianao dia misangy ny tenanao. Raha ny tenako manokana dia fantatro fa misy mpamorona tsara lavitra noho izaho, mpamorona mahay kokoa noho izaho, ary mpanoratra noho izaho… fa ny mifaninana amiko dia ny fomba fampifanarahana ireo volavola, fampandrosoana ary ny atiny hitarika valiny. Ny fitiavako, ny fahaizako mamorona ary ny zavatra niainako manerana ny fiparitahana dia ny tombotsoako tamin'ny fifaninanana.
Taona vitsivitsy taty aoriana ary io masoivohon'ny mpiara-miasa io dia nanitatra ny ekipany mihoatra ny fahaizan'izy ireo fototra ary hatrany amin'ny ezaka ambony sy ambany. Nahazo orinasa matanjaka izy ary io fanitsiana io dia hitohy hitondra ny fahombiazany amin'ny sehatra misy azy.
Raha mpivarotra mijanona amina asa iray ianao izay tsy mianatra manerana ny karazany ny paikadim-barotra, ny teknolojia ary ny fahitana… ataovy tombony ny tenanao ary manomboa mampianatra ny tenanao, manandrana ary mampihatra amin'izay toerana rehetra tianao. Lasa ilaina amin'ny fahalalana ny fomba injeniera sy ny fanangonana ny paikady! Ireo mpivarotra izay mahatakatra ny zava-dehibe dia mitaky fangatahana be dia be ankehitriny… ireo manam-pahaizana manokana no mivoaka.
Ny fiakaran'ny SMB mandroso
Ahoana ny fahazoan'ny orinasa sakaiza ao amin'ny Facebook